Afghanistan | Dr Ko Ko Gyi's Blog
An Unfolding Tale of Two Genocidal “Buddhist” Hells: Myanmar and Sri Lanka
The Bama Buddhists are not alone in Nazi “Buddhist” Hell.
They are in good company of the equally genocidal “Buddhists” of Sri Lanka.
Tags:Afghanistan, Buddhism, Burma, Muslim, Myanmar, NBC News, Saudi Arabia, Sri Lanka
969 Terrorist Monk resolves to remove the Muslims
969 Terrorist Monk Khwe Wira Thu’s head is full of S**T.
“Monk resolves to remove the Muslims”
“Leader of 969 group wants to emulate the EDL”
YesterdayaBuddhist monk admitted that he wants to emulate the English Defence League (EDL) in his efforts to remove the Muslim minority community from Myanmar.
Tags:Afghanistan, Buddhism, Burma, English Defence League, Lashio, Meiktila, Muslim, Myanmar, TERRORIST BUDDHIST HATE GROUP 969, Wira Thu
အာဖဂန်မှာ ရုပ်ပွားတော် ဖျက်တာ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေလား ?
SOURCE:MMSY မမေးလည်းဖြေ (၂) – အာဖဂန်မှာ ရုပ်ပွားတော် ဖျက်တာ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေလား By နေမျိုး
တာလီဘန်တွေ ကိုမွေးပေးခဲ့တဲ့ CIA ကို သာ အပြစ်မတင်သင့်ဘူးလား?
မဆီမဆိုင် မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေကို ထိုင်ဆဲနေမဲ့အစား တာလီ ဘန်ကိုသာ သွားမတိုက်သင့်ဘူးလား?
၂၀၀၇ ရွေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအခင်းတုန်းက ဘုန်းကြီးတွေအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ကိစ္စ အတွက် မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာ တာဝန်ရှိလား။ အဲ့ဒါ လူမျိုးတူ ဘာသာတူ စကားတူ ဒေသတူချင်းတွေပဲ။
နောက်တခု — စစ်အစိုးရခေတ်တုန်းက တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ရွာမီးရှို့ ၊ လူသတ်၊ မုဒိန်းကျင့်၊ ရွာသားတွေ မောင်းထုတ် အကုန်လုပ်တယ်။ အခုလဲ ကချင်ဒေသမှာဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။
ဒီကိစ္စ ၂ ခုလုံးအတွက် မြန်မာပြည်က ဗမာတွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံး အပြစ်ရှိလား။ အပြစ်ပေးမယ်ဆို ရင် ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း အပြစ်ခံကြရမှာ လား။
Selected 1971 Outstanding Student list in Newspaper ဗိုလျတထောငျသတငျးစာ – ၁၉၇၁ လူရညျခြှနျ စာရငျးမြားထုတျပွနျကညြော
Tags:Afghanistan, Asia, Burma, India, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Yunnan